छोटकरीमा : श्रावण महिना (अन्तर्राष्ट्रिय)
यस महिना अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कोरोना एवं लकडाउनको स्थिति कस्तो रह्यो ? राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक क्षेत्रमा के-कस्ता निर्णयहरू भए ? साउन महिनाभरको सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पाउनुहोस् ।
श्रावण ०१ गतेसम्म १,३९,३१,०३१ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर श्रावण १० गतेसम्म १,७८,०१,८१९ पुगेको थियो ।
श्रावण ०१ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ५,९८,३६९ जनाको मृत्यु भएकोमा श्रावण १० गतेसम्म ६,८३,८९१ पुगेको थियो।
श्रावण १० गतेसम्म १,५९,३२,९११ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर श्रावण १७ गतेसम्म १,७८,०१,८१९ पुगेको थियो।
श्रावण १० गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ६,४२,६१९ जनाको मृत्यु भएकोमा श्रावण १० गतेसम्म ६,८३,८९१ पुगेको छ।
श्रावण १७ गतेसम्म विश्वभर १, ११,९१,५७१ जना कोरोना संक्रमित निको भइ घर फर्किएका थिए।
श्रावण १७ गतेसम्म १,८०,१३,१०१ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर श्रावण २४ गतेसम्म १,९५,३२,५३२ पुगेको थियो।
श्रावण १७ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ६,८८,२८९ जनाको मृत्यु भएकोमा श्रावण २४ गतेसम्म ७,२३,१८४ पुगेको थियो।
श्रावण २४ गतेसम्म विश्वभर १,२५,३७,८५४ जना कोरोना संक्रमित निको भइ घर फर्किएका थिए।
श्रावण २४ गतेसम्म १,९५,३२,५३२ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर श्रावण ३१ गतेसम्म २,१४,१२,६४३ पुगेको छ।
श्रावण २४ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ७,२३,१८४ जनाको मृत्यु भएकोमा श्रावण ३१ गतेसम्म ७,६४,४७० पुगेको छ।
श्रावण ३१ गतेसम्म विश्वभर १,४१,९८,०८९ जना कोरोना संक्रमित निको भइ घर फर्किएका थिए।
संयुक्तराज्य अमेरिकाले ह्युस्टनमा रहेको चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। यता, चीनले भने अमेरिकाको यस कदमले दुवै मुलुकबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप हानि पुर्याउने भन्दै विरोध जनाएको थियो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग चीनको विषयलाई लिएर भेटवार्ता गरेका थिए। पोम्पिओले जोन्सनलाई भेट गर्नुको उद्देश्य चीनसँग अमेरिकाको कुटनीतिक युद्धमा बेलायती साथ र समर्थन लिनु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका थिए।
अमेरिकाले चार चिनियाँ नागरिकमाथि भिसा जालसाजी गरेको अभियोग लगाएको थियो। चारमध्ये तीनजनालाई पक्राउ गरिएको छ भने चौथो व्यक्तिलाई सङ्घीय जाँच ब्यूरो (एफबीआइ)ले खोजिरहेको बताएको थियो।
अमेरिका र चीनबीच एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप चर्किएसँगै एक–अर्काे देशमा रहेका महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न निर्देशन दिने क्रम पनि बढेको थियो। अमेरिकाले हुस्टनमा रहेको चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै चीनले पनि जवाफी निर्णयका रूपमा छेन्दुस्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
चीनको आदेशपछि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले चीनको दक्षिण-पश्चिमी सहर चेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास छोडेका थिए। कर्मचारीहरूले 'बक्स' फाइल र फोहोर राखिएका झोला बोकेको देखिएको थियो भने त्यहाँस्थित अमेरिकी झण्डा झिकिएको थियो।
मंगलबारअमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चिनियाँ नागरिकको स्वामित्वमा रहेको लोकप्रिय भिडियो सेयर एप्लिकेसन टिकटक अमेरिकी कम्पनीलाई बिक्री गर्न ६ हप्ताको समया दिएका थिए। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय उठाउँदै टिकटक एप्स अमेरिकी कम्पनी मार्फत अमेरिकामा डाउनलोड गर्न र हेर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अमेरिका-चीन विवाद बढ्दै जाने क्रममा चिनियाँ एप्स टिकटक र वि च्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमापत्रमा राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस निर्देशनसँगै अमेरिकाका यससम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीहरुले ४५ दिन भित्रमा टिकटक र वि च्याटको संचालन बन्द गर्नु पर्नेछ। अमेरिकामा चिनियाँ कम्पनीले बनाएको मोवाइल एपबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र अर्थव्यवस्थामा खतरा भएको आदेशमा उल्लेख छ।
कोरोना एवं लकडाउन समबन्धित :
बोलिभिया प्रहरीले सहरका विभिन्‍न सडक, सवारी र घरमा ४०० भन्दा बढी शव फेला पारेको प्रहरीले जनाएको थियो ।फेला पारिएका शवहरुमध्ये ८५ प्रतिशत कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हुनसक्ने जनाइएको थियो।
विश्वमा जारी रहेको कोरोना भाइरसको संकटका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले विश्वमा बालबालिकाको हेरचाहको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै हालैमात्र विश्वका कम्तीमा पनि ४ करोड बालबालिकाले प्रारम्भिक शिक्षा लिने, विद्यालय जाने र खेल्ने लगायतको वातावरण नपाएको अथवा यस्ता कार्यबाट बालबालिका वञ्चित हुन पुगेका उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो।
हङकङमा बुधबार मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी नयाँ कडा प्रतिबन्धहरु लागु गरिएको बताइएको थियो। विभिन्‍न सार्वजनिक स्थानमा रहँदा तथा कार्यालयमा रहँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। कसैले पनि उक्त नियम उल्लंघन गरेमा ५ हजार हङकङ डलर तथा ६४५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने प्रवाधान राखिएको छ।
चीनले यही वर्ष (सन् २०२०) को अन्त्यसम्ममा कोरोनाविरुद्ध खोप आम प्रयोगका लागि तयार भइसक्ने दाबी गरेको थियो। चाइना नेसनल फर्मास्युटिकल ग्रुप सिनोफार्मअन्तर्गत चाइना नेसनल बायोटेक ग्रुपका अनुसार चीनमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएकाले खोप परीक्षणमा सहभागी हुने व्यक्ति पाउन मुस्किल भइरहेको बाताइएको थियो। तर उक्त खोपको परीक्षण चीनबाहिरका मुलुकमा भइरहेको छ ।
भारतको झारखण्ड राज्यको मन्त्रिपरिषद्ले ‘झारखण्ड संक्रामक महामारी विधेयक’ पारित गर्दै सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाउनेलाई २ वर्ष जेल वा १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान लागू गरेको थियो।
फिलिपिन्समा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। करिब दुई साताअघि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा अनुमति दिइएको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओब्रायनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अमेरिकामा कोरोना संक्रमण हुने ओब्रायन अहिलेसम्मका शीर्ष अधिकारी हुन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने कोभिड-१९ अहिलेसम्म घोषणा गरिएका स्वास्थ्य आपतकालमध्येकै 'सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य संकट' भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले बताएको छ। विगत ६ हप्तामा कुल संक्रमितको संख्या दुई गुणाले बढेको बताइएको थियो।
अस्ट्रेलियाको आधुनिक इतिहासमै सबैभन्दा भीषण गत वर्षको जंगल डढेलोमा परेर करिब ३ अर्ब जीवजन्तु मारिएका वा विस्थापित भएका एक अध्ययनले देखाएको थियो। अस्ट्रेलियाका धेरैवटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डढेलोका कारण १४ करोड ३० लाख स्तनधारी, २ अर्ब ४६ करोड सरीसृप, १८ करोड चराचुरुंगी र ५ करोड १० लाख भ्यागुता प्रभावित भएको उल्लेख छ ।
अमेरिकी बायोटेक कम्पनी मोडर्नाले तयार पारेको कोभिड–१९ को खोप बाँदरमा परीक्षण गर्दा निकै सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको अध्ययनले देखाएको थियो। खोप लगाइएका बाँदरका नाक र फोक्सोमा कोरोना भाइरसका विषाणु थप वृद्धि नभएको न्यु इंग्ल्यान्ड मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा उल्लेख छ।
कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देखाउँदै हङकङ प्रशासनले स्थानीय निर्वाचनलाई एक वर्ष पछि सार्ने निर्णय गरेको छ। हङकङको उक्त निर्णयप्रति ‘प्रजातन्त्र पक्षरत’ हङकङवासीलाई भने आक्रोशित तुल्याएको छ। उनीहरूले निर्वाचनलाई पछि सार्ने निर्णय प्रतिपक्षीलाई कमजोर पार्ने अभिप्रायबाट आएको बताएका थिए।
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो। मुखर्जी आफैंले ट्विटरमार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका थिए।
भारतीय उर्दू कवि राहत इंदौरीको ७० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि श्री अउरोविन्दो अस्पताल भर्ना गरिएका इंदौरीलाई मंगलवार दुईपटक हृदयघात भएको र अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो।
कोरोना भाइरसमाथि विजय पाएको १०२ दिनपछि न्यूजील्याण्डमा फेरि कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखापरेको थियो।मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शहरमध्येका एक अउकल्याण्डमा आजै मंगलबार एउटै परिवारका चारजनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फेला परेको हो। अहिले न्यूजील्याण्डमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको तेस्रोतहको प्रावधान लागू गरिएको छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले कोरोना विरुद्ध संसारको पहिलो खोपको सफल परीक्षण भएर मान्यता दिइएको बताएका थिए ।रुसको गामालिया रिसर्च सेन्टरले बनाएको उक्त भ्याक्सिन पुटिनकै छोरीमा समेत प्रयोग गरिएको बताइएको थियो।
गत ५ अगष्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै अयोध्याको राम मन्दिरको भूमि पूजामा सहभागी भएका महन्त नृत्य गोपाल दासलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यूपीका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले उनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्लूएचओले अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धानमा खानेकुरा वा प्याकेजिङबाट भाइरस सर्न सक्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेकाले यससबारे डराउनु नपर्ने बताएको थियो। तर त्यसलाई लिन या पुर्याउन जाँदा भने सजकता अपनाउनुपर्ने बताइएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले कोरोना भ्याक्सिनविरुद्ध ३ वटा खोप निर्माण गरिरहेको बताएका थिए। नयाँदिल्लीस्थित लालकिलामा ७४औं भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै मोदीले छिट्टै ‘भारतमा बनेको कोरोना खोप’ उपलब्ध हुने भएको बताएका थिए।
यस महिनाका राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक गतिविधिहरू :
रुसले भू-उपग्रहमा प्रहार गर्न सकिने क्षेप्यास्त्रजस्तो हतियारको अन्तरिक्षमा परीक्षण गरेको अमेरिका र यूकेले दाबी गरेका थिए। अमेरिकी सरकारले भू-उपग्रहलाई मार हान्न सकिने क्षमता भएको उक्त अस्त्रको प्रयोगलाई चिन्ताको विषय भनेको थियो।
जम्मु–कश्मीरमा ‘गोर्खा’ ले पाए स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र पाएका थिए। मे १८ मा जम्मु–कश्मीर सरकारले त्यहाँ लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय र पाकिस्तानबाट आएका मुसलमान शरणार्थीहरूलाई स्थायी नागरिकसरह नै स्थायी बसोबासलगायतका अधिकार उपभोग गर्ने निर्णय सहि आवेदन माग गरेको थियो। प्राप्त आवेदनकै आधारमा जून २६ देखि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) पुगेका दुई जना अन्तरिक्षयात्री डगलस हर्ली र रोबर्ट बेन्केन पृथ्वीमा फर्किएका थिए । स्पेस एक्स ड्रयागन क्याप्सुल नाम गरेको अन्तरिक्ष यानबाट फर्केका दुई अन्तरिक्षयात्रीहरू अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको पेन्साकोलाको तटस्थित गल्फ अफ मेक्सिकोमा सकुशल अवतरण गरेका थिए।
पाकिस्तानले भारतसँगका विवादित क्षेत्रहरू समेट्दै आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेका छ। नक्सामा हाल भारत प्रशासित जम्मू र कश्मीर क्षेत्र एवं गुजरातको जुनागढसमेत समेटिएको छ।
भारतीय राजनीतिमा दशकौंदेखि प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको अयोध्यास्थित राम मन्दिर निर्माण बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा शुरु भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार दिउँसो विशेष कार्यक्रमबीच भूमि पूजा गरेर मन्दिर निर्माणको विधिवत् थालनी गरेका थिए।
दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा भएको चुनावमा राजपाक्षे दाजुभाइको दलले अत्याधिक बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले चुनावमा अत्याधिक बहुमत हासिल गरेको घोषणा गरेका थिए।
सोमबार बेलारुसमा निर्वाचनको सर्वेक्षणले राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकाशेन्‍को पुन: निर्वाचित हुने प्रक्षेपण गरेपछि राजधानी मिन्स्क र अन्य विभिन्‍न सहरमा प्रदर्शनकारी र दंगा प्रहरीबीच झडप भएको थियो। बेलारुसको एक सरकारी टेलिभिजनले सन् १९९४ देखि राष्ट्रपति पदमा रहेका लुकाशेन्को पुन: निर्वाचित हुने प्रक्षेपण गरेपछि प्रदर्शनकारीहरु सडकमा उत्रिदा हालसम्म एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको र १२० पक्राउ परेको जनाइएको थियो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विवादित सीमा क्षेत्रहरुमा शान्ति कायम गरेर भारतसँग रणनीतिक विश्वास कायम गर्नु चीनको कूटनीतिक प्राथमिकता भएको बताएको थियो। विदेश मन्त्रालयले आगामी दिनमा चीनले छिमेकी मुलुकहरुका साथ ‘साझा हित’ विस्तार गर्ने प्रयास गर्ने पनि जनाएको थियो।
बेलारुसको राष्ट्रपति पदमा अलेक्जान्डर लुकासेन्को ८०.२३ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भएका थिए। ६५ वर्षीय लुकासेन्को सन् १९९४ देखि सत्तामा छन्। उनी छैटौंपटक बेलारुसको राष्ट्रपति पदमा विजयी भएका हुन् । सन् २०१५ मा भएको चुनावमा लुकासेन्कोले ८३.५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडनले कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका थिए। उनी उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन लड्ने पहिलो अश्वेत महिला हुनेछिन्।
चर्चित लोकतन्त्रवादी प्रकाशक जिम्मी लाई पक्राउको विरोधमा हङकङवासीले मंगलबार प्रदर्शन गरेका थिए । हङकङको सबैभन्दा ठूलो एप्पल डेली समाचारपत्रका प्रकाशक जिम्मीलाई विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा सोमबार पक्राउ गरिएको थियो । उनको पक्राउसँगै एप्पल डेलीको बिक्री ४ गुणाले बढेको थियो।
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति उम्मेदवार कमला ह्यारिसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अक्षम नेता भएको र अमेरिकालाई 'धुजाधुजा' बनाएको आरोप लगाएका थिए। बाइडेनले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि ट्रम्पले गरेको कमजोर प्रयासको पनि आलोचना गरेका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा इजरेल र संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा सम्झौतामा पुगेका थिए। योसँगै इजरेल उसले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्कका थप भागमा त्यसलाई विस्तार गर्ने विवादास्पद योजना रद्द गर्न सहमत भएको थियो।
फेसबुक र ट्‍विटरले अमेरकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको अभियानलाई दण्डित गरेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले 'बच्चाहरूमा कोरोना भाइरसविरुद्धको रोग प्रतिरोधी क्षमता हुने' दाबी गरेका थिए, उक्त भिडियो सामग्री फेसबुकले डिलिट गरिदिएको हो
एयर इन्डियाको विमान केरलको कालिकट विमानस्थलमा शुक्रबार साँझ दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुबईबाट आएको एयर इन्डियाको आईएक्स-१३४४ बोइङ ७३७ विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनामा परी दुई जना पाइलटसहित कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्‍चारमाध्यमलेजनाएको छ । त्यस्तै कम्तीमा ५० जना घाइते भएको र तीमध्ये १५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
लेबननको राजधानी बेइरुतमा सन् २००५ मा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री रफिक हरिरिको हत्याको मुद्दामा फैसला आउनु केही समय अगाडि ठूलो विस्फोटन भएको थियो। बेरुतको बन्दरगाहामा राखिएको झन्डै २७ सय ५० टनको विस्फोटक पर्दाथ (एमोनियम नाइट्रेट) राखिएको गोदाममा विस्फोट हुँदा कम्तीमा मृत्यु हुनेको १०० पुगेको र ४ हजार भन्दा बढी घाइते भएका थिए। विस्फोटमा परी एक सयभन्दा बढी बेपत्ता भएका लेबननका मिडियाहरूले जनाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ लेबनानका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले विस्फोटबाट कोही नेपाली पनि घाइते नभएको बताएका थियो। गैरआवासीय नेपाली संघ, लेबनानका कोषाध्यक्ष हेम मगरका अनुसार लेबनानभरि झन्डै १२ सय नेपाली कार्यरत छन् ।
शक्तिशाली विस्फोटमा सरकारको लापरबाही मुख्य कारण भएको भन्दै लेबनानको राजधानी बेरुतमा सरकारी विरोधी प्रदर्शनहरु शुरु भएका छन्। संसद भवननजिक भएको झडपको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीहरुले दर्जनौं सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेका थिए।
विष्फोटको घटनापछि लेवनानमा कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने आशंका गरिएको थियो । विष्फोटको घटनापछि लेवनानका अस्पतालमा विरामीको चाप बढेको थियो। अस्पतालमा चाप बढेसँगै कोरोना संक्रमण पनि बढ्न सक्ने त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री हमद हसनले जनाएका बीबीसीले जनाएको थियो।
﻿विस्फोटपछि बेरुत भ्रमणमा गएका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले लेनबनानको नेतृत्वमा ‘गहन परिवर्तन’को आवश्यकता रहेको बताएका थिए। तहसनहस भएको उक्त सहर भ्रमण गरेका माक्रोनले घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गरिनुपर्नेसमेत बताएका थिए। सन् २००५ मा भएको पूर्वप्रधानमन्त्री रफिक हरिरीको हत्याको मुद्दामा फैसला आउनुभन्दा केही समय अगाडि उक्त ठूलो विस्फोटन भएको हो।
लेबनानको राजधानी बेरुतमा भयानक विस्फाेटन भएको पाँच दिनपछि विश्वका नेताहरूले लेबनानको सहयोगका लागि बैठक गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघ र फ्रान्सको संयुक्त पहलमा इन्टरनेटमार्फत भर्चुअल बैठक गरिएको थियो।
बेरुतमा गत मंगलबार राति भएको शक्तिशाली विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या २०० पुगेको छ भने घाइते भएकाहरूको संख्या ५ हजार नाघेको बताइएको थियो। उक्त विस्फोटपटि सहर खण्डर बनेको छ। विस्फोटमा सरकारको कमजोरी मुख्य कारक भएको बताउँदै जनताहरु आन्दोलित भइरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रिय नियोगहरुले लेबनानमा मानवीय संकट आउने बताएका थिए। राष्ट्रिय संघीय नियोगले तत्काल खाद्यान्‍न र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले लेबनानका लागि २९७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। विस्फोटलगत्तै लेबनान पुगेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले उक्त सहयोग सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन्। उक्त सहयोग रकम सीधै लेबनानी जनतालाई उपलब्ध गराइने जनाइको थियो।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले कोरोना विरुद्ध संसारको पहिलो खोपको सफल परीक्षण भएर मान्यता दिइएको बताएका थिए। रुसको गामालिया रिसर्च सेन्टरले बनाएको उक्त भ्याक्सिन पुटिनकै छोरीमा समेत प्रयोग गरिएको बताइएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले क्लिनिकल टेस्टको तेस्रो चरणमा पुगेका भनेको ६ वटा भ्याक्सिनमा यो नपरेको पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको थिय।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेर्टेले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माणमा रुसले सफलता प्राप्त गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उनले रुसले आफूहरुलाई नि:शुल्क रुपमा खोप आपूर्ति गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए।
रुसले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरूद्ध बनाएको खोपको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका बेला उसले त्यस्ता चिन्ताहरूलाई "बिल्कुलै आधारहीन" भनेको छ। जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिकाले यो खोपलाई लिएर सतर्क रहन अनुरोध गरेको थियो।
शुक्रबार जर्मनीका स्वास्थ्यमन्त्री जेन्स स्फाहनले आगामी महिनाहरुमा कोरोना भाइरसको खोप उपलब्ध हुनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए।
शनिबार कोरोनाविरुद्ध रुसले बनाएको खोपले काम गर्ने अमेरिकाले विश्वास व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी खोप प्रभावकारी र उपयोगी हुने विश्वास शुक्रबार व्यक्त गरेका थिए।